मजदुरी गरेर हुर्काएको छोरो तस्करले मारेपछि उजाडियो आमा कलावतीको सपना ! – Nepal Online Khabar
काठमाण्डौ : नेपाल प्रहरीका साहायक निरिक्षक गोविन्द बिक सानै छंदा उनका बाबुले यो संसार छाडेर गएका थिए । त्यतिबेला उनी जम्मा नौ वर्षका बालक थिए । बाबुको निधनपछि आमा कलावती बिकले गोबिन्दसंगै तीन छोरा र एक छोरीलाई मज’दुरि गरेर हुकाईन् ।
गोबिन्द तीन दाजुभाईमा माहिला छोरा थिए । सुकुम्बासी परिवारका गोबिन्दकी आमाको बाबुको नि’धनपछि सहारा केही थिएन । बुवा बितेपछि परिवारको पालनपो’षणको अभिभारा आमा कलावतीको काँधमा आईलाग्यो । सम्पत्तीका नाममा केवल एउटा ओत लाग्ने झुपडी थियो गोबिन्दको परिवारकालागी ।
त्यही झुपडीमा हुर्किएका थिए गोबिन्द । गोबिन्द र उनका दिदी भाईहरुलाई हुर्काउनकोलागी आमा कलावतीले अर्काको खेतमा काम गरिन् । दाउरा बेचिन् । मजदुरी गरिन् । आफ्ना सन्तानलाई हु’र्काउन आमा कलावतीले निकै क’ष्ट सहेरै भएपनि छोराछोरीलाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने सपनामा उनी लागि रहिन् ।
दाईभाईले पढाईमा धेरै रुचि देखाएनन । तर गोविन्दले पढाई छोडेनन । पुनर्वासको क गाउँमा रहेको बागेश्वरीमा माविबाट एसएलसी पास गरे । र थप पढाईका लागि उनकी आमा कलावतीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पस भर्ना गरिन् ।
धनगढीमा डेरा गरेर पढाउन सक्ने आर्थिक हैसियत थिएन गोबिन्दको । तर पनि छोरालाई पढाएर ठूलो मान्छे बनाउने सपना पुरा गर्न गोबिन्दकी आमाले रातदिन मज’दुरी गरिन् । अन्ततः तीन वर्षअघि आमा कलावतीको सपना पुरा भयो ।
गोविन्दले नेपाल प्रह’रीमा प्र’हरी सहायक निरिक्षकमा नाम निकाले । त्यो दिन कलावतीका लागि मात्र नभएर उनको समुदायकै लागि ठूलो खुशीको दिन थियो । दलि’त समुदायबाट असई हुने गोविन्द पहिलो युवा थिए । पढेर के हुन्छ र भनेर बीचमै पढाई छोड्ने दलि’त समुदायका विद्यार्थीहरुका लागि त उनी प्रेर’णाको स्रोत नै थिए ।
किनकी उनी आफ्नै बलबुता, अध्ययन र मिहिनेतले असई भएका थिए । उनको न पहूँच थियो । न त उनी कुनै राजनैतिक दलका का’र्यकर्ता थिए । आमा कला’वतीको छोरा ठूलो भएको हेर्ने सपना भने धेरै समय टिकेन ।
भदौ पहिलो साता धनगढी उपमहानगरपालिका—१२ जुगेडा स्थित प्रहरी चौकीको ईञ्चार्जको जिम्मे’वारी सम्हालेका गोविन्द कार्तिक १ गते राति गस्तीको क्रममा निस्किएका बेला तस्करहरुको एम्बुसमा परे । उनको बि’भ’त्स ढंगले तस्करहरुले ह’ त्या गरे ।
गोविन्द राति गस्तीबाट हराएको खबर सुनेपछि अत्तालिएका उनकी आमा र श्रीमती उनको लाश भेटिएयता होसमा छैनन् । परिवारका सदस्यहरु आफै विक्षिप्त झै छन् । गोविन्द सिंगो द’लित समुदायको एक्लो असई थियो । उसैलाई मारिदिए । तस्करले गोविन्दले धनगढीमा डेरा लिई छोराछोरीलाई पढाईरहेका थिए ।
Prevबलिउडमा तहल्का मच्चाएकी नेपालकी तेरिया मगर के गर्दै छिन ? हेर्नुहोस ।(फोटोफिचर)
Nextखुसीको खबर : वरिष्ठ कलाकार हरिवंश र उनकी श्रीमतीले कोरोना भाइ’रसलाई जिते…हेर्नुहोस् ।
लघुवित्तको ऋणले उठिबास